Daniel James အကွောငျး ပွောကွရအောငျ . . . - SPORTS MYANMAR
Daniel James အကွောငျး ပွောကွရအောငျ . . .
By Edi Tor November 7, 2019
မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှရောသီ အပွောငျး အရှေ့ ကာလ တုနျးက ကစား သမား သဈ ၃ ဦး ချေါယူ အားဖွညျ့ ခဲ့ ပါတယျ ။ သူတို့ ကတော့ ၀မျ ဘဈဆာကာ ၊ ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ နဲ့ ဟယျရီ မကျဂှဲယား တို့ ပါပဲ ။ အရငျနှဈ တှေ က လူသဈတှေ ဟာ အသငျးနဲ့ အဆငျမပွေ ခဲ့ ပမေယျ့ ဒီ ၃ ယောကျ စလုံး ကတော့ အသငျး အတှကျ အားထား ရသူတှေ ဖွဈလာ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဒီ အတှကျ ယူနိုကျတကျ ပရိသတျတှေ ပြျောရှငျ ကနြေပျ နမှောပါ ။
သူတို့ ၃ ဦး ထဲ မှာ ဘယျသူက အဖိုး အတနျဆုံး ချေါယူမှု ဖွဈမလဲ ဆိုတာ ကတော့ ပွောဖို့ စောနေ ပါသေးတယျ ။ ၃ ယောကျ စလုံး ဟာ ပရိသတျ အကွိုကျတှေ ဖွဈကွပွီး အားပေးသူ ကိုယျစီ ရှိနကွေ ပါတယျ ။ ဒီ အထဲ မှာ အလေးပေး ဖျောပွဖို့ ရှေးခယျြ လိုကျသူ ကတော့ ဝေးလျ တောငျပံ ကစား သမားလေး ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ ပါပဲ ။
ဂြိမျးဈ ဟာ ယူနိုကျတကျ ဆီကို ဆှမျးဆိ အသငျး ကနေ ပေါငျ ၁၅ သနျး နဲ့ ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့သူ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒီ အပွောငျး အရှေ့ မှာ ယူနိုကျတကျ တောငျပံ ကစား သမားဟောငျး ၊ လကျရှိ ဝေးလျ နညျးပွ ရိုငျယနျဂဈ ရဲ့ ထောကျခံမှု တှေ မြားစှာ ပါဝငျ ခဲ့ပွီး ဂြိမျးဈ ကို ယူနိုကျတကျ ရဲ့ အနာဂါတျ တဈခု အဖွဈ ညှနျးဆို ခဲ့ ပါတယျ ။
ဂြိမျးဈ ဟာ နညျးပွ ဆိုးရှား ရဲ့ အသငျး မှာ အလြှငျ အမွနျ အံဝငျ ခဲ့ သလို အားထားရတဲ့ ကစား သမား တဈဦး အဖွဈ ကို လြှငျလြှငျမွနျမွနျ ရောကျရှိ သှားခဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဂြိမျးဈ ဟာ အသကျ ၂၁ နှဈသာ ရှိသေး တာကွောငျ့ အားသာခကျြ ၊ အားနညျးခကျြ တှေ ရှိနဆေဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဘယျနရောတှေ မှာ အားသာတယျ ၊ ဘယျနရောတှေ အားနညျးတယျ ၊ ဘယျလို အနာဂါတျတှေ ရှိနသေလဲ ဆိုတာ လလေ့ာ ကွညျ့ကွရအောငျ . . .
၁ ။ Pace
ဂြိမျးဈ ရဲ့ အကောငျးဆုံး လကျနကျ ကတော့ လြှငျမွနျတဲ့ ပွေးအား ပါပဲ ။ ယူနိုကျတကျ ကို မရောကျခငျ ကတညျးက ဂြိမျးဈ ဟာ သူ့ရဲ့ လြှငျမွနျမှု ကို အသုံးခပြွီး ပွိုငျဘကျ ခံစဈကို ထိုးနှကျ နခေဲ့ တာပါ ။ ဒီရာသီ မှာတော့ ဂြိမျးဈ ဟာ ရကျဖိုဒျ့ နဲ့ ပေါငျးစပျပွီး ယူနိုကျတကျ ရဲ့ တနျပွနျ တိုကျစဈ မှာ အတှဲညီညီ လုပျဆောငျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
လီဗာပူး ၊ ခြဲလျဆီး တို့လို တိုကျစဈ အားသနျ နောကျတနျးတှေ ပါဝငျတဲ့ အသငျးမြိုးနဲ့ ရငျဆိုငျ ရတဲ့ ပှဲတှေ မှာ ဆိုးရှား ဟာ ရကျဖိုဒျ့ နဲ့ ဂြိမျးဈ တို့ ကို ခံစဈ ပွနျဆငျး မကူစဘေဲ ပွိုငျဘကျ ခံစဈမှုးတှေ အနားမှာ ကနျြရဈ ကာ ယူနိုကျတကျ ဘောလုံး ပွနျရခြိနျ မှာ အဝေးဘောတှေ ပေးပို့ပွီး one-by-one ရငျဆိုငျ ရတဲ့ အနေ အထား ကို ဖနျတီး ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီဗြုဟာ ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ပှဲမှာ အောငျမွငျ ခဲ့ပွီး အိုရီဂီ ဆီကနေ ဘောလုံးရယူကာ ဂြိမျးဈ ဆီိကို ခငျးပေးလိုကျခြိနျ မှာ အနျဒီရောဘတျဆနျ ဟာ တိုကျစဈကြှံပွီး Position Out နခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဂြိမျးဈ နဲ့ ရကျဖိုဒျ့ တို့ ဟာ သူတို့ရဲ့ မွနျနှုနျး ကို အသုံးခပြွီး ဗနျဒိုကျ နဲ့ မာတဈ တို့ကို ကြျောဖွတျကာ အဖှငျ့ဂိုး ကို သှငျးပေး နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
၂ ။ Off the ball movements
ဆိုးရှား ရဲ့ ၄-၃-၁-၂ ကစားကှကျ မှာ ရကျဖိုဒျ့ နဲ့ ဂြိမျးဈ တို့ ဟာ တောငျပံ သမား ဆနျဆနျ ကစားခဲ့ကွပွီး အတှငျး ကို ပွေးဝငျ ကာ ပွိုငျဘကျ ခံစဈမှုး တှေ ကို ဆှဲချေါသှား ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ လှတျသှား တဲ့ နရောတှကေို နောကျက လိုကျတဲ့ ကှငျးလယျ တိုကျစဈ သမား ( အနျဒရေ ပါရဲရား ) က ပွေးဝငျပွီး ဂိုးရနိုငျတဲ့ အခှငျ့ အရေးတှေ ကို ရှာဖှေ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီလို ပုံစံတှေ ကို လီဗာပူး ၊ ခြဲလျဆီး တို့နဲ့ ပှဲတှေ မှာ မွငျတှေ့ ရပွီး ပါရဲရား ရဲ့ အရညျ အသှေး မမွငျ့မားမှု ကွောငျ့ ဒီအခှငျ့ အရေးတှေ ဟာ အကောငျးဆုံး ရလဒျ ထှကျပျေါ မလာခဲ့ ပါဘူး ။ တကယျလို့ ထိပျတနျး ကှငျးလယျ တိုကျစဈ သမား တဈဦးသာ ချေါနိုငျခဲ့ မယျ ဆိုရငျတော့ ယူနိုကျတကျ တို့ ၄-၃-၁-၂ ကစားကှကျ နဲ့ ပို အဆငျပွေ နိုငျခြေ ရှိ ပါတယျ ။
၃ ။ Passing and shooting
ပရီးမီးယားလိဂျ တဈခုလုံး နဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျတော့ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ ရဲ့ ဖွတျတငျဘော နဲ့ ဂိုး ကနျသှငျးမှု မှတျတမျးတှေ ဟာ နိမျ့ပါး နပေါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ မနျခကျြ စတာ ယူနိုကျတကျ မှာတော့ ဂြိမျးဈ ဟာ ဖွတျတငျဘော အတိကဆြုံး ( ၂၀% ) နဲ့ ကနျခကျြ တိကမြှု ဒုတိယ အကောငျးဆုံး ( ၄၁% ) အဆငျ့ တှမှော ရပျတညျ နခေဲ့ ပါတယျ ။
ဂြိမျးဈ ဟာ ညာခွေ ကနျခကျြ နဲ့ ပေးပို့မှု တှေ တိကကြောငျးမှနျ ပွီး နောဝှဈချြ နဲ့ ပှဲတုနျးက ရကျဖိုဒျ့ ကို တငျပေး လိုကျတဲ့ ဘောလုံးမြိုး ဟာ ဝေးလျ တောငျပံ ကစား သမားလေး ရဲ့ အရညျ အသှေး ကို ခနျ့မှနျးလို့ ရနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ဘယျတောငျပံ ကနေ အတှငျးကို ဆှဲဝငျပွီး ညာခွေ နဲ့ ကနျခကျြ တှေ ဟာလညျး အားပါး မွနျဆနျပွီး ဂိုးတှေ ကို ရရှိ စခေဲ့ ပါတယျ ။
၄ ။ ကာယကွံ့ခိုငျမှု
ဒီ အပိုငျး ကတော့ ဂြိမျးဈ ရဲ့ အားနညျးခကျြ ပါ ။ လြှငျမွနျတဲ့ ကစား သမားတို့ရဲ့ အားနညျးခကျြ လို့ ဆိုနိုငျ သလိုပဲ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ ဟာ ကာယပိုငျး မှာ အားနညျး ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ မကွာခဏ မွပွေငျပျေါ ကို လဲကြ ခဲ့ပွီး တနျပွနျ တိုကျစဈလိုမြိုး နရောလှတျ ပေါပေါ မြားမြား မရှိတဲ့ အခွအေနေ တှေ ( ဥပမာ ခံစဈပိတျဆို့မှု ကို ထိုးဖောကျရခွငျး ) မှာ ဂြိမျးဈ ရဲ့ ကာယပိုငျး အားနညျးမှု ဟာ ပြော့ကှကျ ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
၅ ။ ဘယျခွေ
ညာခွေ ကနျခကျြ ကောငျးပမေယျ့ ဂြိမျးဈ ရဲ့ Weak-foot ဖွဈတဲ့ ဘယျခွေ ကတော့ ကနျခကျြ ရော ဖွတျတငျဘော ပါ အားနညျးနေ ပါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျတောငျပံ မှာ ထားရငျ သှငျးဂိုး ရနိုငျပမေယျ့ ဖွတျတငျဘော ကောငျးကောငျးတှေ မထှကျတော့ ပါဘူး ၊ ညာတောငျပံ မှာ ဆိုရငျတော့ ပွောငျးပွနျဖွဈသှားခဲ့ ပါတယျ ။ Weak-foot ကနျခကျြတှေ ကို တိုးတကျအောငျ လကေ့ငျြ့မယျ ဆိုရငျတော့ ပိုကောငျးတဲ့ သူတဈယောကျ ဖွဈလာ မှာပါ ။
၆ ။ နိဂုံးခြုပျ
ဒနျနီရယျ ဂြိမျးဈ ဟာ အလား အလာကောငျးတှေ ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ ကစား သမား တဈယောကျ ဆိုတာ ငွငျးလို့ မရနိုငျ ပါဘူး ။ ထိပျတနျး အဆငျ့ ကို ရောကျဖို့ ဆိုတာ ကတော့ အမြားကွီး လိုအပျ နပေါသေး တယျ ။ ကာယပိုငျး ပို အားကောငျးအောငျ ၊ ဘယျခွေ ကနျခကျြတှေ ပိုကောငျးအောငျ လကေ့ငျြ့လာ နိုငျမယျ ဆိုရငျတော့ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အားထားရတဲ့ တောငျပံ ကစား သမား တဈဦး ဖွဈလာမှာပါ ။ ဘာပဲ ဖွဈဖွဈ ဒီလို ကစား သမားမြိုး ကို ပေါငျ ၁၅ သနျး တညျးနဲ့ ချေါနိုငျ ခဲ့တာ ကတော့ တနျတယျလို့ သုံးသပျ ရမှာပါပဲ . . .
Daniel James အကြောင်း ပြောကြရအောင် . . .
မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေရာသီ အပြောင်း အရွှေ့ ကာလ တုန်းက ကစား သမား သစ် ၃ ဦး ခေါ်ယူ အားဖြည့် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ ကတော့ ၀မ် ဘစ်ဆာကာ ၊ ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် နဲ့ ဟယ်ရီ မက်ဂွဲယား တို့ ပါပဲ ။ အရင်နှစ် တွေ က လူသစ်တွေ ဟာ အသင်းနဲ့ အဆင်မပြေ ခဲ့ ပေမယ့် ဒီ ၃ ယောက် စလုံး ကတော့ အသင်း အတွက် အားထား ရသူတွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီ အတွက် ယူနိုက်တက် ပရိသတ်တွေ ပျော်ရွှင် ကျေနပ် နေမှာပါ ။
သူတို့ ၃ ဦး ထဲ မှာ ဘယ်သူက အဖိုး အတန်ဆုံး ခေါ်ယူမှု ဖြစ်မလဲ ဆိုတာ ကတော့ ပြောဖို့ စောနေ ပါသေးတယ် ။ ၃ ယောက် စလုံး ဟာ ပရိသတ် အကြိုက်တွေ ဖြစ်ကြပြီး အားပေးသူ ကိုယ်စီ ရှိနေကြ ပါတယ် ။ ဒီ အထဲ မှာ အလေးပေး ဖော်ပြဖို့ ရွေးချယ် လိုက်သူ ကတော့ ဝေးလ် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ပါပဲ ။
ဂျိမ်းစ် ဟာ ယူနိုက်တက် ဆီကို ဆွမ်းဆိ အသင်း ကနေ ပေါင် ၁၅ သန်း နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့သူ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒီ အပြောင်း အရွှေ့ မှာ ယူနိုက်တက် တောင်ပံ ကစား သမားဟောင်း ၊ လက်ရှိ ဝေးလ် နည်းပြ ရိုင်ယန်ဂစ် ရဲ့ ထောက်ခံမှု တွေ များစွာ ပါဝင် ခဲ့ပြီး ဂျိမ်းစ် ကို ယူနိုက်တက် ရဲ့ အနာဂါတ် တစ်ခု အဖြစ် ညွှန်းဆို ခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျိမ်းစ် ဟာ နည်းပြ ဆိုးရှား ရဲ့ အသင်း မှာ အလျှင် အမြန် အံဝင် ခဲ့ သလို အားထားရတဲ့ ကစား သမား တစ်ဦး အဖြစ် ကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ရောက်ရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဂျိမ်းစ် ဟာ အသက် ၂၁ နှစ်သာ ရှိသေး တာကြောင့် အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် တွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဘယ်နေရာတွေ မှာ အားသာတယ် ၊ ဘယ်နေရာတွေ အားနည်းတယ် ၊ ဘယ်လို အနာဂါတ်တွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ လေ့လာ ကြည့်ကြရအောင် . . .
ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အကောင်းဆုံး လက်နက် ကတော့ လျှင်မြန်တဲ့ ပြေးအား ပါပဲ ။ ယူနိုက်တက် ကို မရောက်ခင် ကတည်းက ဂျိမ်းစ် ဟာ သူ့ရဲ့ လျှင်မြန်မှု ကို အသုံးချပြီး ပြိုင်ဘက် ခံစစ်ကို ထိုးနှက် နေခဲ့ တာပါ ။ ဒီရာသီ မှာတော့ ဂျိမ်းစ် ဟာ ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ယူနိုက်တက် ရဲ့ တန်ပြန် တိုက်စစ် မှာ အတွဲညီညီ လုပ်ဆောင် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
လီဗာပူး ၊ ချဲလ်ဆီး တို့လို တိုက်စစ် အားသန် နောက်တန်းတွေ ပါဝင်တဲ့ အသင်းမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင် ရတဲ့ ပွဲတွေ မှာ ဆိုးရှား ဟာ ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ ကို ခံစစ် ပြန်ဆင်း မကူစေဘဲ ပြိုင်ဘက် ခံစစ်မှုးတွေ အနားမှာ ကျန်ရစ် ကာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံး ပြန်ရချိန် မှာ အဝေးဘောတွေ ပေးပို့ပြီး one-by-one ရင်ဆိုင် ရတဲ့ အနေ အထား ကို ဖန်တီး ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီဗျုဟာ ဟာ လီဗာပူး နဲ့ ပွဲမှာ အောင်မြင် ခဲ့ပြီး အိုရီဂီ ဆီကနေ ဘောလုံးရယူကာ ဂျိမ်းစ် ဆီိကို ခင်းပေးလိုက်ချိန် မှာ အန်ဒီရောဘတ်ဆန် ဟာ တိုက်စစ်ကျွံပြီး Position Out နေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဂျိမ်းစ် နဲ့ ရက်ဖိုဒ့် တို့ ဟာ သူတို့ရဲ့ မြန်နှုန်း ကို အသုံးချပြီး ဗန်ဒိုက် နဲ့ မာတစ် တို့ကို ကျော်ဖြတ်ကာ အဖွင့်ဂိုး ကို သွင်းပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဆိုးရှား ရဲ့ ၄-၃-၁-၂ ကစားကွက် မှာ ရက်ဖိုဒ့် နဲ့ ဂျိမ်းစ် တို့ ဟာ တောင်ပံ သမား ဆန်ဆန် ကစားခဲ့ကြပြီး အတွင်း ကို ပြေးဝင် ကာ ပြိုင်ဘက် ခံစစ်မှုး တွေ ကို ဆွဲခေါ်သွား ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ လွတ်သွား တဲ့ နေရာတွေကို နောက်က လိုက်တဲ့ ကွင်းလယ် တိုက်စစ် သမား ( အန်ဒရေ ပါရဲရား ) က ပြေးဝင်ပြီး ဂိုးရနိုင်တဲ့ အခွင့် အရေးတွေ ကို ရှာဖွေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီလို ပုံစံတွေ ကို လီဗာပူး ၊ ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ ပွဲတွေ မှာ မြင်တွေ့ ရပြီး ပါရဲရား ရဲ့ အရည် အသွေး မမြင့်မားမှု ကြောင့် ဒီအခွင့် အရေးတွေ ဟာ အကောင်းဆုံး ရလဒ် ထွက်ပေါ် မလာခဲ့ ပါဘူး ။ တကယ်လို့ ထိပ်တန်း ကွင်းလယ် တိုက်စစ် သမား တစ်ဦးသာ ခေါ်နိုင်ခဲ့ မယ် ဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက် တို့ ၄-၃-၁-၂ ကစားကွက် နဲ့ ပို အဆင်ပြေ နိုင်ချေ ရှိ ပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် တစ်ခုလုံး နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်တော့ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ဖြတ်တင်ဘော နဲ့ ဂိုး ကန်သွင်းမှု မှတ်တမ်းတွေ ဟာ နိမ့်ပါး နေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် မှာတော့ ဂျိမ်းစ် ဟာ ဖြတ်တင်ဘော အတိကျဆုံး ( ၂၀% ) နဲ့ ကန်ချက် တိကျမှု ဒုတိယ အကောင်းဆုံး ( ၄၁% ) အဆင့် တွေမှာ ရပ်တည် နေခဲ့ ပါတယ် ။
ဂျိမ်းစ် ဟာ ညာခြေ ကန်ချက် နဲ့ ပေးပို့မှု တွေ တိကျကောင်းမွန် ပြီး နောဝှစ်ခ်ျ နဲ့ ပွဲတုန်းက ရက်ဖိုဒ့် ကို တင်ပေး လိုက်တဲ့ ဘောလုံးမျိုး ဟာ ဝေးလ် တောင်ပံ ကစား သမားလေး ရဲ့ အရည် အသွေး ကို ခန့်မှန်းလို့ ရနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘယ်တောင်ပံ ကနေ အတွင်းကို ဆွဲဝင်ပြီး ညာခြေ နဲ့ ကန်ချက် တွေ ဟာလည်း အားပါး မြန်ဆန်ပြီး ဂိုးတွေ ကို ရရှိ စေခဲ့ ပါတယ် ။
၄ ။ ကာယကြံ့ခိုင်မှု
ဒီ အပိုင်း ကတော့ ဂျိမ်းစ် ရဲ့ အားနည်းချက် ပါ ။ လျှင်မြန်တဲ့ ကစား သမားတို့ရဲ့ အားနည်းချက် လို့ ဆိုနိုင် သလိုပဲ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ် ဟာ ကာယပိုင်း မှာ အားနည်း ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မကြာခဏ မြေပြင်ပေါ် ကို လဲကျ ခဲ့ပြီး တန်ပြန် တိုက်စစ်လိုမျိုး နေရာလွတ် ပေါပေါ များများ မရှိတဲ့ အခြေအနေ တွေ ( ဥပမာ ခံစစ်ပိတ်ဆို့မှု ကို ထိုးဖောက်ရခြင်း ) မှာ ဂျိမ်းစ် ရဲ့ ကာယပိုင်း အားနည်းမှု ဟာ ပျော့ကွက် ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
၅ ။ ဘယ်ခြေ
ညာခြေ ကန်ချက် ကောင်းပေမယ့် ဂျိမ်းစ် ရဲ့ Weak-foot ဖြစ်တဲ့ ဘယ်ခြေ ကတော့ ကန်ချက် ရော ဖြတ်တင်ဘော ပါ အားနည်းနေ ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဘယ်တောင်ပံ မှာ ထားရင် သွင်းဂိုး ရနိုင်ပေမယ့် ဖြတ်တင်ဘော ကောင်းကောင်းတွေ မထွက်တော့ ပါဘူး ၊ ညာတောင်ပံ မှာ ဆိုရင်တော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ ပါတယ် ။ Weak-foot ကန်ချက်တွေ ကို တိုးတက်အောင် လေ့ကျင့်မယ် ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာ မှာပါ ။
၆ ။ နိဂုံးချုပ်
ဒန်နီရယ် ဂျိမ်းစ် ဟာ အလား အလာကောင်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ကစား သမား တစ်ယောက် ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရနိုင် ပါဘူး ။ ထိပ်တန်း အဆင့် ကို ရောက်ဖို့ ဆိုတာ ကတော့ အများကြီး လိုအပ် နေပါသေး တယ် ။ ကာယပိုင်း ပို အားကောင်းအောင် ၊ ဘယ်ခြေ ကန်ချက်တွေ ပိုကောင်းအောင် လေ့ကျင့်လာ နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ယူနိုက်တက် အတွက် အားထားရတဲ့ တောင်ပံ ကစား သမား တစ်ဦး ဖြစ်လာမှာပါ ။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလို ကစား သမားမျိုး ကို ပေါင် ၁၅ သန်း တည်းနဲ့ ခေါ်နိုင် ခဲ့တာ ကတော့ တန်တယ်လုိ့ သုံးသပ် ရမှာပါပဲ . . .